Nin Naafo ahaa oo dareenkiisa dib u helay - BBC Somali
Nin Naafo ahaa oo dareenkiisa dib u helay
Lahaanshaha sawirka University of California
Nin naafo ahaa, ayaa dib u awooday in uu lugahiisa ku socdo, isagoo adeegsanaya aalad aqrisa maskaxdiisa, sida ay seynisyahanadu sheegeen.
Hirarka maskaxda, ayaa lagu turjumay kombuyuutar, kaasi oo kaddib xukumaya dareenka murqaha lugaha.
Cilimi baaristan Mareykanku sameeyay, ee lagu qoray wargeyska cilmiga farsamada caafimaadka iyo soo celinta awoodaha muuqda, ayaa muujinaya in ruuxa lagu sameeyay tijaabada uu awooday socodka afar mitir oo lagu taageeray.
Qubarada, ayaa sheegay in la helo isu dheelitirnaanta, in ay tahay arrinta u baahan in wax laga qabto.
Dhaawaca ku yimaada lafdhabarta, ayaa maskaxda ka celiya inay hesho dhambaalada. Si kasta ha ahaatee, maskaxda, ayaa weli awood u leh inay fariimo abuurto, waxayna, lugaha awood u leeyihiin, inay helaan fariimahaasi.
Baarayaasha jaamacadda California, ayaa u adeegsaday kombuyuuterka maskaxda in lagu dhaafo dhawaca, nin shan sano lugaha naafo ka ahaa.
Dr Mark Bacon oo ka tirsan hey'ad cilmi baaris ku sameysa laf dhabarta, ayaa BBC-da u sheegay, inay tani tahay wajigii ugu horeeyay daraasad xiiso leh.